TSY MISY FANAFODINY INTSONY RAHA TSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
TSY MISY FANAFODINY INTSONY RAHA TSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA
Hampiseho firaisankina amin’ny HMF hanatanteraka hetsika fitondrana am-bavaka ny firenena rahampitso etsy Antsahamanitra ny zanak’idada. Tsy hisy araka izany ny hetsika etsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka rahampitso fa hiaraka ho eny amin’ny HMF ny rehetra. Hitohy kosa anefa ny hetsika eny an-kianja ny Zoma 02 novambra izao.
Ankoatra izay dia nambaran’i Ct Rasoamalala odette Brenda androany teny amin’ny Magro Behoririka fa tsy misy fanofodiny intsony raha tsy mody ny filoha Ravalomanana Marc. Ireny zavamisy eny Ankatso ireny hoy izy dia tsy tokony hidiran’ny miaramila ny faritry ny oniversité. Noho izany dia mitaky ihany koa izahay ny hamoahana ireo mpianatra nosamborina. Ny Cst Rakotonirina Lovanantenaina avy any Amoron’i mania kosa dia nilaza fa nipoaka daholo izay tsy tokony hipoaka. Nipoaka ny any amin’ny birao, ary mipoaka ny eny Ankatso. Raha nijery vaovo tamin’ny gazety na radio ny tenako hoy izy, dia tsy nino mihitsy hoe tena nisy ve ny famonoana any Atsimo. Rehefa nandeha ny tatitra nataon’ilay rangahy avy eny atsimondrano dia nisy tokoa ilay foza manaikitra foza ary hivoaka ny marina. Navahana ny vehivavy sy ny tanora, hoy izy ary ny vatan-dehilahy avy tifirina. Tsy rariny izany fa samy malagasy no mifamono. Na ny 26 janoary 2009 na ny 07 febroary na io any atsimo io hoy ny Cst Lova dia ilay rangahy ao Ambohitsorohitra no tomponandraikitra. Ankoatra izany dia nambarany fa rehefa nitety fokontany maro tany amin’ny faritra Ambositra iny ny tenany dia niary feo ny olona hoy izy fa tsy mahafantatra afa tsy ny filoha Ravalomanana Marc. Izany TGV izany dia tsy misy any ambanivohitra fa eo an-tampon-tanana fotsiny. Fanontaniana nampetraky ny olona any hoy Lova dia ny hoe rahoviana no ho tonga i dada ? ny navaliko azy hoy ity olomboantendry ity dia nalefako nohenoin’izy ireo ny feon’i dada izay nikabary teto. Hafaliana no nandraisan’izy ireo izany. Dikan’izany dia miandry ary manantena ny filoha Ravalomanana Marc ny vahoaka malagasy.
TSY MISY MPANAO POLITIKA AZO AMPITAHAINA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 octobre 2012 31 octobre 2012 Catégories Politique
4 pensées sur “TSY MISY FANAFODINY INTSONY RAHA TSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA”
Ny Cst Rakotonirina Lovanantenaina avy any Amoron’i mania kosa dia nilaza fa nipoaka daholo izay tsy tokony hipoaka. Nipoaka ny any amin’ny birao, ary mipoaka ny eny Ankatso.
ARY IANAO CST IO INONA NY VITANAO HANTSAHARANA AN DRAJOELINA @ ASA RATSINYU?
Ils sont en train de chercher un partenaire.Le groupe anglo-néerlandais Royal Dutch Shell me paraîtrait un choix judicieux.Les néerlandais excellent dans le domaine des constructions portuaires ( Rotterdam est le premier port européen)ainsi que dans les constructions de pipeline.C’est un groupe reconnu mondialement car les Anglais ont une longue expérience dans le domaine de l’exploration pétrolière.Leur faculté d’exploitation à eux deux ont fait leurs preuves depuis des années
za ko alou maita oe dada iany no fanafodin’ ity firenentsika ty e
Tohin’ny ny nambarako testy ambony ary fanamafisana ny voalazako:
Précédent Article précédent : Mpianatra Ankatso : nampiasana herisetra indray, tsy voahaja ny » franchise universitaire »
Suivant Article suivant : ANKATSO : NATAO HAZALAMBO INDRAY IREO MPIANATRA